कोरोना महामारीले विश्व शक्ति सन्तुलनमै उथलपुथल, चीनले पाँच वर्षमा संसार जित्दै
संसारलाई ठप्प पार्ने कोरोना महामारी सुरु भएको डेढ वर्ष भयो । विश्वलाई तिरिखिरी पार्ने महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले विश्वभरका ‘एलिट’ वर्गलाई समेत नमज्जाले घुँडा टेकायो । शक्ति सन्तुलनमा नै हेरफेर ल्यायो । कोरोनाले विश्वका शक्तिशाली देशको छवि र अर्थतन्त्रलाई अंगभंग बनायो । कोरोना महामारी अझै नामेठ भएको छैन । संसारमा कोरोना नयाँनयाँ प्रकृतिमा फैलिरहेको छ । तर विकाशोन्मुख तथा मध्यम आय भएका देशले भने कोरोनालाई सहजै पाखा लगाएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । कोरोना महामारी बारे देशले अपनाएको कार्यशैली र क्षमताका आधारमा कस्तो प्रभाव पार्यो/पार्छ भन्ने निर्धारण भएको छ ।
२५ करोड नागरिक चरम गरिबीको चपेटामा
कोरोना महामारीले संसारभर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक वा स्वास्थ्य प्रणालीलगायतलाई नराम्रोसँग थला पा¥यो । कोरोनाले विश्वभरकै अर्थ व्यवस्थालाई धरासायी बनायो । एक अध्ययन अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् ०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै गिरावट आएको छ । करोडौँ मानिसले रोजगार गुमाउँदा उनीहरूको आयस्रोतमासमेत कमी आएको छ । अर्थतन्त्र उकास्न अर्बौ डलर खर्च भएका छन् । अझै अर्थतन्त्र सुधार हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
एक अध्ययन अनुसार चीनको अर्थव्यवस्थामा छलाङ मारिरहँदा विश्वका थुप्रै धनी राष्ट्रको अवस्था भने विजोग छ । सन् २०२२ सम्म पनि पूर्ववत् अवस्थामै अर्थतन्त्र फर्किन गाह्रो रहेको अर्थशास्त्रीको दाबी छ । विकाशोन्मुख देशका २५ करोडभन्दा बढी नागरिकले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने पनि अध्ययनहरूले बताइरहेका छन् ।
महामारीको फाइदा चीनलाई, पाँच वर्षमै संसार जित्दै
चीन र दक्षिण कोरियाको उचित व्यवस्थापनका कारण कोरोना महामारीलाई चाँडै नियन्त्रणमा लिन सफल भए । संसार कोरोनाले थिल्थिलो भएका बेलामा पनि चीनको अर्थतन्त्र भने सन् ०२१ मा ८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनको यस आर्थिक वृद्धिदर महामारीअघि पश्चिमी दैशको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी हो । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि पश्चिमा देशले लकडाउन गरेका कारण उनीहरूको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने जसले चीनलाई फाइदा पुगेको हो ।
मनोरञ्जन तथा पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द भएपछि पश्चिमा देशको अर्थतन्त्र धरासयी बनेको हो । ति देशहरूमा घरेलु तथा मेडिकल सामाग्रीको मागमा ह्वात्तै वृद्धि पनि भयो । अमेरिकालाई ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च करले चीनबाट हुने निर्यात अर्को रेकर्ड राख्यो । सिंगो एसियामा चीनले गतिलोसँग आफ्नो प्रभाव जमायो ।
चीनले भने प्रशान्त क्षेत्रमा खुल्ला व्यापार र यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म आफ्नो आधारभूत परियोजनाका साथ उपस्थित हुँदा दबदबा कायम राखेको हो । पश्चिमा देशबाट भइरहेको बहुमूल्य पदार्थको निर्यातलाई कम गर्नका लागि चीनले भने एडभान्स प्रविधिमा लगानी गर्यो । यस हिसावले हेर्दा चीनले अमेरिका, बेलायत जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशलाई आगामी पाँच वर्षमै उछिनेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने लण्डन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री स्टिभ शिफेरेज बताउँछन् । यस्तै, कोरोना महामारीका बेला युरोपको तुलनामा रुसको अर्थतन्त्र पनि खस्किएको देखिँदैन । विश्वमा पहिलो कोरोनाविरुद्ध खोप बनाउन सफल भएको दाबी गरेको रुसले महामारी चाँडै नियन्त्रणमा लिएर अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट बचाएको थियो ।
हेलचेक्र्याइँले महाशक्ति राष्ट्र परे थला
अमेरिका, बेलायत र युरोपका देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर पुनः सुरु भएको छ । उनीहरूले लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदा ०२० को अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आउने देखिएको छ । कोरोना कहरका कारण अमेरिकामा थुप्रैको रोजगारी गुम्यो भने अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग थला पर्यो । अमेरिकाको अर्थतन्त्र ०२२ सम्ममा ५ प्रतिशतले गिरावट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सन् ०२१ मा विकाशोन्मुख देशले पनि सबैभन्दा धेरै नोक्सान बेहोर्नु पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यी देशसँग कोरोना खोप खरिद गर्न आर्थिक संकट हुने तथा संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण असर पर्ने देखिएको हो ।
यस्तै, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिकी जस्ता मुलुकहरूलाई पनि गिरेको अर्थतन्त्र उकास्न सहज नहुने देखिएको छ । महामारीअघि यी देशको अर्थतन्त्र भने राम्रै वृद्धि भइरहेको थियो, तर कोरोनाका कारण यी देशका नागरिकले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वाधिक हतियार निर्यात गर्ने अमेरिकाले भाइरससँग लड्न सकेन
कुन देशसँग कति हतियार छन् भन्ने आकडाले ति देशको शक्ति मापन हुँदै आएको छ । हातहतियारले भने अमेरिका अगाडि छ । स्विडेनस्थित एक रिसर्च इन्टिट्युटका अनुसार हतियार निर्यातमा पछिल्लो पाँच वर्षमा अमेरिकाको विश्व उपस्थिति ३७ प्रतिशत छ । फ्रान्स र जर्मनको पनि हतियार निर्यातमा बढोत्तरी हुँदा रुस र चीनको त्यति भूमिका देखिँदैन । हतियारको आयातको मामिलामा मध्यपूर्वमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
स्टकहोम इन्टरनेशल पिस रिसर्च इन्स्टिट्युट(सिपरी)का अनुसार सन् २०१६ देखि २०२० को पाँच वर्षमा विश्वमा हतियारको बिक्री स्थिर रह्यो । अमेरिकाबाट मात्रै हातहतियार करिब आधा निर्यात मध्यपूर्वमा हुन्छ । जसमा साउदी अरबले मात्रै २४ प्रतिशत अमेरिकी हतियार खरिद गर्छ । अमेरिकाले विश्वका ९६ देशमा हतियार निर्यात गर्छ ।
त्यस्तै, हतियार निर्यातमा फ्रान्सको ४४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने जर्मनको २१ प्रतिशतसम्म बढेको छ । मध्यपूर्व हतियारको मनग्ये विक्रि हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ६१ प्रतिशत, इजिप्टमा १३६ प्रतिशत र कतारमा ३६१ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । भने रुस र चीन दुवै देशको हतियार निर्यातमा गिरावट आएको भए पनि मध्य–सहारा अफ्रिकी देशका यी देश सबैभन्दा ठूला निर्यातकर्ता बनेका छन् । अध्ययन अनुसार रुसको हतियार निर्यातमा २२ प्रतिशतले गिरवाट आएको छ । हतियार निर्यातमा सम्पन्न देखिएका राष्ट्र भने कोरोना महामारीका बेलामा असफस सिद्ध भए । हतियार सम्पन्न हुँदैमा महामारीलाई राक्ने सकिँदैन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
कोरोनाले विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रको छविमा ल्याएको उथल–पुथल
कोभिड–१९ महामारीले विश्वभरका प्रमुख अर्थतन्त्रको स्थिति र लोकप्रियतालाई प्रभावित तुल्यायो । अध्ययनअनुसार विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र मानिएको अमेरिका कोरोना महामारीका कारण विश्वमै नराम्रोसँग नोक्सान बेहो¥यो । जसले उसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रोसँग विश्वसनियता गुमायो । महामारीको सामना गर्ने क्षमतालाई लिएर विश्वभर भएको रेटिङले पनि अमेरिका लगायतका देशलाई बदनाम बनाएको हो ।
त्यस्तै महामारीको दोस्रो केन्द्रविन्दू बनेको युरोपेली युनियन पनि आफ्नो सदस्य राष्ट्रलाई समेत सहयोग गर्नमा असफल बन्यो । भने महामारीको भयावह स्थिति बेहोरेको अमेरिकाले पनि कोरोना संकट थाम्नै सकेन । ‘थिङ्क ट्याङ्क’को पिउ रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार अमेरिकी छवि विश्वभरका राजनीतिक विश्लेषकका लागि प्रमुख छलफलको विषय नै बन्यो ।
सन् २००३ मा इराकमाथि हमलापछि खुम्चिएको लोकप्रियतालाई कोरोना नियन्त्रणमा भएको असफलताले अमेरिका विरोधी नयाँ बहसलाई जन्मादियो । अमेरिकी विदेश नीतिनिर्माताले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनकि स्थितिलाई राम्रो बनाउन हरसम्भव प्रयत्न भने गरिरहे । अध्ययनका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा अमेरिकाको छवि सबैभन्दा नराम्रो विन्दुमा झरेको छ । केही प्रमुख सहयोगी देशमा उत्माद उत्पन्न गराइदिने र विश्वभर सन्देहवादको स्तरमा वृद्धि गर्ने अमेरिकी विदेश नीतिका कारण मात्रै होइन, महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाएको शैलीले पनि उसको छविमा तीब्र गिरावाट ल्याएको हो ।
कोभिड–१९ महामारी सुरु भएको केही समयपछि नै अमेरिका प्रकोपको केन्द्र बन्यो र अझै महामारीले गाँजिनै रहेको छ । महामारीका लागि तयारीमा कमी, केही प्रमुख सहरमा स्वास्थ्य हेरचाह प्रणाली संकट, मास्क प्रयोगप्रति नागरिकको विरोध र सामाजिक दूरी नियमको अवहेलनाले अमेरिकाको बिग्रिरहेको छविलाई झनै खराब बनाइदियो ।
ट्रम्प प्रशासनले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो उपस्थिति देखाउनै मानेन । बेलायतमा अमेरिकी लोकप्रियता दुई दशकमा सबैभन्दा तल ४१ प्रतिशतले झरेको छ भने अन्य युरोपेली देशहरुका बीच झनै खराब बनेको छ । त्यस्तै फ्रान्समा ३१ प्रतिशत र जर्मनीमा २६ प्रतिशत लोकप्रियतामा कमी आएको छ ।
अमेरिका मात्रै त्यस्तो एक देश होइन जसले महामारीमा आफ्नो छविलाई धमिल्यायो । विश्व शक्तिको रुपमा उठ्दै गरेको अर्को देश चीनले पनि आफ्नो छविमा गिरवाट देखेको छ । महामारीको पहिलो केन्द्र बनेको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीलाई प्रकोपका बारेमा समयमै सही जानकारी उपलब्ध गराउँन सकेन, संक्रमितको तथ्यांक लुकाउने प्रयास गर्यो। प्रकोपको नयाँ केन्द्र बनिरहेको भारतले पनि यहीँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । युरोपेली संघ अन्तर्गतको स्पेन र इटाली जस्ता देशहरूलाई कोरोनाल थिल्थिलो बनायो ।
थिङ्क ट्याङ्कको अध्ययनले एक दशकअघि चीनप्रति अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, स्विडेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, स्पेन र क्यानडाको नकारात्मक दृष्टिकोण उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । तर, महामारीको सुरुवातपछि भने यस दृष्टिकोणमा अझ वृद्धि भएको छ । चीन सरकारले कोभिड प्रकोपलाई आफ्नो देशमा नियन्त्रण गर्नमा सफल भएको दावी गरे पनि यी देशका धेरैजसो नागरिकले चीनले प्रकोप नियन्त्रणमा फितलो भूमिका खेलेको विश्वास गर्छन् ।
१४ देशहरुमा गरिएको सर्वेक्षणले औसत ६१ प्रतिशत मानिसले चीनले प्रकोप नियन्त्रणमा एक असफल काम गरेको बताउँछन् । यद्यपि, अमेरिकाको तुलनामा यो स्तर धेरै राम्रो हो । यी सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक गम्भीर नेतृत्व संकटलाई सतहमा ल्याएको छ । अमेरिका र चीन विश्वका सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएका यी देशबीच भविष्यमा एक नेतृत्व संघर्ष रहनेछ, विशेषगरी अमेरिकाले महामारी नियन्त्रणमा जस्तो भूमिका खेल्यो त्यसले उसको शक्ति र सम्पन्नताको विश्वासमा संकट उत्पन्न गराएको छ ।
चीनको सुधारोन्मूख छवि
कोरोना संक्रमण अहिले संसारभर फैलिएको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाका कारण यस देशलाई आफ्नो बिग्रिएको छविलाई सुधार्न चीनले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । तर कोरोनालाई त्यति गम्भीररुपले नलिएका निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा भन्दा पनि चीनको आलोचना, उत्तर कोरिया र आफ्नो चुनावी अभियानप्रति बढी केन्द्रित रह्यो । श्वेत मोनोपोली मानसिकताका ट्रम्प मास्क प्रयोगको एसियाली संस्कारलाई मजाक बनाएर उडाए । अन्ततः उनी पनि मास्क लगाउन बाध्य भए । राष्ट्रपतिले नै मास्क र सामाजिक दूरीलाई मजाक बनाएपछि भाइरसले निकै तीव्रता पायो । आफू विश्व शक्ति राष्ट्र भएको अहम् बोक्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्ना देशका नागरिक प्रभावित छन् भन्नेतर्फ सोच्नुभन्दा पनि विश्वमा आफ्नो प्रभाव घटाउँन सक्ने देशहरुको निगरानी र आलोचनामा व्यस्त रहे । यसले अन्य देश र अमेरिका भित्रै पनि ट्रम्प प्रशासनप्रति असन्तुष्ट बढायो ।
महामारीअघि मास्क प्रयोग एसियाली महादेशमा बाहेक विश्वका अन्य देशमा खासै प्रचलनमा थिएन । मास्कको प्रयोगको सुरुवात चीनबाटै भएको इतिहास छ र त्यहाँ मास्क प्रयोग गर्नु एउटा संस्कार नै थियो, र छ । तर, चीनका प्रतिस्पिर्धी पश्चिमा देशहरु ब्राजिल, अमेरिकालगायतले मास्कको प्रयोगलाई वेवास्ता गरे । खिल्ली उडाउँदै मजाग गरिरहे । जबकि मास्कको प्रयोगले महामारी प्रसार हुनमा एक प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रमाणित गरिसकेको छ ।
चीनमा कोरोना महामारी चाँडै नियन्त्रणमा आउनुको श्रेय त्यहाँको सरकारलाई नै जान्छ । समयमै भाइरसका बारेमा विश्वलाई जानकारी उपलब्ध गराउन चीन असफल रहे पनि उसले आफ्ना नागरिकलाई प्रभावित हुन नदिन रातारात हजारौं कोठाको क्वारेन्टाइन बनाउनु, धेरैभन्दा धेरै नागरिकको परीक्षण गराउनु र मास्क, पिपिई जस्ता स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन गर्नमा कुनै ढिला–सुस्ती गरेन । कारोना संक्रमण महामारी घोषणा भएपछि चीनले यसलाई एक गम्भिर संकटको रुपमा मात्रै लिएन, उसले सोही अनुसारको नियन्त्रण प्रणाली पनि अपनायो ।
आफ्नो देशभित्र महामारी नियन्त्रणमा आएको संकेत पाउनसाथ चीनले दक्षिण अफ्रिका, चिलीलगायत आफ्नो सहयोगी देशमा स्वास्थ्य सहायता पुर्याउँन र स्वास्थ्य विशेषज्ञको टोली पठाउन थाल्यो । उसले युरोपका सम्पन्न गणतान्त्रिक देशहरु जस्तै स्पेन र इटाली, फिलिपिन्स र मलेसियालगायत छिमेकी देशमा पनि मास्क र चिकित्सा टोली पठायो । उसले विकाशोन्मुख देशमा ऋणको आह्वान गर्यो। चीनले युरोप र अमेरिकामा प्रशस्तै स्वास्थ्य सामाग्री निर्यात गर्यो । चिनियाँ नेताहरुले यस नीतिलाई ‘हेल्थ सिल्क रोड’ नामले ब्रान्डिङ गरे, जो पहिलेदेखि नै जोड्ने प्रयास भइरहेको थियो, जसले उनीहरुलाई चिनियाँ विदेश नीतिको केन्द्रविन्दु मानिने ‘बेल्ड एण्ड रोड परियोजना’सँग जोड्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका थुप्रै नेताहरुलाई महामारी सहयोगका बारेमा वार्ताका लागि आह्वान गरे । उनले जि २०, दक्षिण पूर्वी एशियाली संघ र अफ्रिकी संघहरुसँग वार्ता गरे । बेइजिङले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दुई अर्ब सहयोग दिने घोषण गर्यो र यदि चिनियाँ वैज्ञानिकले खोप पत्ता लगाए सबै देशसम्म पुर्याउँने बाचा पनि गरेको थियो । यतिबेला पनि चीनले विभिन्न मध्यम आय भएका देशमा कोभिड विरुद्धको खोप अनुदान र ऋणमा पुर्याइरहेकाे छ । यसरी चीनले एक विश्व संकटलाई नेतृत्व हासिल गर्ने एक अवसरको रुपमा उभ्यायो ।
चीनको यस स्वास्थ्य नीतिले उसको छविमा मात्रै विस्तारै सुधार आएको छैन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पनि सुधारमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीमा चीन कसैसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभन्दा पनि आफ्नो सार्वजनकि विदेश नीतिलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको अनुमान लगाउँन सकिन्छ, जसले उसप्रतिको विश्वसनीयतालाई बढाउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा एक तात्तातो बहस यो छ कि के कुनै देशको नरम शक्ति नीति र लोकप्रियताले वास्तवमै अर्थ राख्छ ? वा यसले वास्तवमै शक्तिको गतिशिलतालाई प्रभावित पार्छ ? देशहरुबीच शक्ति सम्बन्धमा विश्वनीयता एक अत्यन्तै परिवर्तनशील हुन्छ भने अर्कोतिर नरम शक्ति नीति अहिले पनि सही परिस्थितिमा उपयोग गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै देशको स्थितिको बारेमा विश्लेषक र विद्धानहरुले जे–जे सोचे पनि देशहरुले आफ्नो छविको बारेमा महत्वपूर्ण रुपले ध्यान दिन्छन् । उनीहरु विश्वमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन हरेक वर्ष अर्बौँ डलार खर्च गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कोभिड–१९ प्रकोपको गम्भीर प्रभावलाई लिएर प्रमुख शक्तिराष्ट्रको छविमाथि अहिलेसम्म चर्चा भएको छैन । वास्तवमा कोभिड–१९ महामारीपछि कुनै केही पनि उस्तै रहेन, चाहे त्यो चीन, रुसको छविमा होस् वा अमेरिकाको वा विकशित र समृद्ध महादेश युरोपको छविमा होस् । कोभिड महामारीका कारण छविमा आएको भारी गिरावट सुधारर्नु यी शक्ति राष्ट्रहरुका सामु एक ठूलो चुनौतीको रुपमा उभिएको छ ।
आइतबार १५, चैत २०७७ १३:५०:४८ मा प्रकाशित